တမ်မီ အေဘရာဟမ် အနေနဲ့ မားကပ်ရက်ဖိုဒ့် ဆီက ဘာတွေ သင်ယူလေ့လာသင့်သလဲ ? - SPORTS MYANMAR
တမ်မီ အေဘရာဟမ် နဲ့ မားကပ် ရက်ဖိုဒ့် ဆိုတာ အသက် မတိမ်း မယိမ်းတွေ ပါပဲ ။ အပြင်မှာ သူတို့ ၂ ယောက် ဟာ ကျွန်တော်တို့ ထင်တာထက် ပိုပြီး သိကျွမ်း ရင်းနှီး ကြပါတယ် ။ ရက်ဖိုဒ့် က မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် လူငယ် အသင်းမှာ ကစားခဲ့ပြီး စီနီယာတွေ ဒဏ်ရာရမှုကြောင့် အသင်းကြီးမှာ ပါဝင် ခဲ့ရတာ မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် သူတို့ ၂ ယောက် အကြားမှာ ကြီးကြီးမားမား ကွာဟမှု တွေ ရှိလာ မှာမဟုတ် ပါဘူး ။ အခု အချိန် မှာတော့ အေဘရာဟမ် ဟာ ရက်ဖိုဒ့် ဆီက သင်ယူ ရမယ့် ဂျူနီယာ တစ်ဦး ဖြစ်သွားခဲ့ ပါပြီ ။
အေဘရာဟမ် ဟာ တိုက်စစ်မှုး ကောင်း တစ်ယောက် ရဲ့ အလားအလာ တွေ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားပါတယ် ။ လူငယ် တစ်ဦး ပီပီ လုပ်ရဲ ကိုင်ရဲ တဲ့ သတ္တိ အပြည့် ရှိနေပြီး ဘာကို မှ မကြောက်တဲ့ စိတ်ဓါတ် ကလည်း ချဲလ်ဆီး နည်းပြ လမ်းပတ် ရဲ့ တပည့်စစ်စစ် လို့ တောင် ပြောလို့ ရနိုင် ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ဘောလုံးပွဲ တစ်ပွဲကို စိတ်ဓါတ် တစ်ခုတည်းနဲ့ အနိုင် ကစားလို့ မရပါဘူး ။ အထူး သဖြင့် ပွဲတစ်ပွဲ ကို အနိုင်ရ ဖို့ အဓိက အကျဆုံး ဖြစ်တဲ့ သွင်းဂိုး တွေကို တာဝန်ယူ ရတဲ့ တိုက်စစ်မှုး တစ်ဦး ဖြစ်နေပြီ ဆိုရင်တော့ တစ်ကိုယ်တော် စွမ်းဆောင်ရည် တွေ မှာ ကောင်းမွန် ဖို့ လိုအပ် လာမှာ အသေအချာ ပါပဲ ။
အေဘရာဟမ် အတွက် စံနမူနာ ယူစရာ တိုက်စစ်မှုးကောင်းတွေ အများကြီး ရှိပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကစား နေရတဲ့ လိဂ် ၊ ကစား ရတဲ့ အသင်း အနေ အထား ၊ လက်ရွေးစင် အသင်း အတွက် အထောက် အကူ ပြုမှု ဆိုတဲ့ အချက်တွေ အရ ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ မားကပ် ရက်ဖိုဒ့် ဟာ အေဘရာဟမ် အတွက် အတုယူ လေ့လာ သင့်တဲ့ ကစား သမား တစ်ယောက် ဖြစ်မယ် ဆိုတာ သိသာ စေနိုင် ပါတယ် ။
ဘာကြောင့် မားကပ် ရက်ဖိုဒ့် ဖြစ်ရတာ ပါလဲ ? ဒီရာသီ မှာ ရက်ဖိုဒ့် ဟာ ယူနိုက်တက် အတွက် အထောင် တိုက်စစ်မှုး နေရာ ကနေ ကစား ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါက အေဘရာဟမ် ရဲ့ favorite နေရာပါ ။ နောက်ပြီးတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကစား သမားတွေဟာ အထောင် တိုက်စစ်မှုး ကို ကောင်းကောင်း မပံ့ပိုး ပေးနိုင် ကြပါဘူး ။ ဒါကြောင့် ရက်ဖိုဒ့် ဟာ အခြားအသင်းက တိုက်စစ်မှုးတွေထက် ပိုပြီး ရုန်းကန် ခဲ့ရ ပါတယ် ။ ဒါကလည်း အေဘရာဟမ် ရဲ့ အခြေအနေ နဲ့ တူညီ နေတာပါပဲ ။
လီဝန်ဒေါ့စကီး ၊ ရီးရဲမက်ဒရစ် တုန်းက ရိုနယ်ဒို ၊ ဟယ်ရီကိန်း ၊ လူးဝစ်ဆွာရက် တို့ ဟာ မားကပ်ရက်ဖိုဒ့် ထက် ပိုကောင်းတဲ့ အထောင်တိုက်စစ်မှုးတွေဆိုတာ တကမ္ဘာလုံး သိကြပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ကစားရတဲ့ အသင်းတွေမှာ အသင်းဖော်တွေရဲ့ ပံ့ပိုးမှုတွေ ကို အပြည့်အ၀ ရခဲ့ကြတာပါ ။ ရက်ဖိုဒ့် မှာ ဒါမျိုးတွေ မရှိခဲ့ သလို အေဘရာဟမ် လည်း ဒီလိုမျိုးတွေ မရခဲ့ ပါဘူး ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်နဲ့ အနီးစပ်ဆုံး အခြေအနေတူ ကစားသမား ကို ဥပမာထားတာက ပိုပြီး ယုတ္တိ ရှိနိုင် ပါတယ် ။
ရက်ဖိုဒ့် ဆီကနေ အေဘရာဟမ် ဘာတွေ သင်ယူနိုင်သလဲ ဆိုတာ ကို မပြောခင် မှာ ဒီရာသီ က သူတို့ ၂ ယောက်ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို နှိုင်းယှဉ် ကြည့်ကြရအောင် ။ ဘယ်နေရာတွေ မှာ အေဘရာဟမ် က ရက်ဖိုဒ့် ဆီကနေ သင်ယူဖို့ လိုအပ် နေသလဲ ဆိုတာ ကိုပေါ့ . . .
ရက်ဖိုဒ့် ဟာ ဒဏ်ရာ မရခင် အထိ ယူနိုက်တက် အတွက် ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ ၁၈၈၁ မိနစ် ကစားပြီး ၁၄ ဂိုး သွင်းပေး ခဲ့ ပါတယ် ။ အေဘရာဟမ် ကတော့ ၁၉၄၄ မိနစ် ကစားပြီး ၁၃ ဂိုး သွင်းနိုင် ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါက သိပ်ပြီး ကြီးမားတဲ့ ကွာခြား ချက် မဟုတ်ခဲ့ ပါဘူး ။ Assist ကလည်း သိပ် မကွာခြားတာ ကြောင့် ပြောပလောက်စရာ မဖြစ်ခဲ့ ပါဘူး ။
အချို့ ကတော့ ရက်ဖိုဒ့် ဟာ ပင်နယ်တီတွေ အများကြီး သွင်းခဲ့တယ်လို့ ဆိုချင် ကြမှာပါ ။ ဒါပေမယ့် ပင်နယ်တီ ဆိုတာ လွယ်ကူတဲ့ အရာ မဟုတ်ပါဘူး ။ အသက် ၂၂ နှစ် အရွယ်မှာ ကိုယ့်ထက် ဝါတွေ ၊ အတွေ့ အကြုံတွေ အများကြီး ရှိတဲ့ စီနီယာတွေ ကို ကျော်ပြီး ပင်နယ်တီ ကန်ခွင့် ရထားတယ် ၊ ကပ္ပတိန် လက်ပတ် ရထားတယ် ( ရက်ဖိုဒ့် ကို ဆိုလိုခြင်း မဟုတ် ) ဆိုတာ က ဒီ ကစား သမား အပေါ် အသင်းက ယုံကြည်မှု ရှိနေလို့ ၊ ဒီကစား သမား မှာ တာဝန်ယူရဲတဲ့ သတ္တိတွေ ရှိနေလို့ ဆိုတာ သိသာ မြင်သာ စေပါတယ် ။
သွင်းဂိုးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောစရာ ရှိလာတာ ကတော့ ရက်ဖိုဒ့် ဟာ ယူနိုက်တက် တစ်သင်းလုံး သွင်းဂိုး ရဲ့ ၃၁% ကို သွင်းယူ ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အေဘရာဟမ် ကတော့ ၂၅% သာ ရှိခဲ့ ပါတယ် ။ ၁၄ ဂိုး နဲ့ ၁၃ ဂိုး အကြား ကွာဟမှု ကျဉ်းမြောင်းပေမယ့် အသင်းအတွက် အရေးပါမှု မှာတော့ ရက်ဖိုဒ့် က ပိုသာ ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ သွင်းဂိုးတိုင်းဟာ အသင်းအတွက် အဖိုးထိုက်တန်တဲ့ ကျောက်မျက် ရတနာတွေ ဖြစ်ရမယ် ဆိုတဲ့ အချက် ကို အေဘရာဟမ် လေ့လာ သင်ယူနိုင်မှာပါ ။
Shooting Accuracy နဲ့ ကန်ချက် ကနေ ဂိုးပြောင်းလဲနိုင်မှု နှုန်း ကလည်း တူတူလောက် ပါပဲ ။ တိုင်ထိ ၊ ဘားထိ တဲ့ ကိစ္စ မှာတော့ ရက်ဖိုဒ့် က ၆ ကြိမ် ၊ အေဘရာဟမ် က ၂ ကြိမ် ပါ ။ ဂိုးဘေး က ကပ်ထွက်သွား တာမျိုး ကိုလည်း shot miss လို့ သတ်မှတ်တာကြောင့် ဒီအချက်ကို သိပ်ပြီး ရေးကြီး ခွင်ကျယ် လုပ်ဖို့ မသင့်ဘူးလို့ ထင် ပါတယ် ။
ရက်ဖိုဒ့် နဲ့ အေဘရာဟမ် တု့ိ အကြားမှာ ကြီးမားတဲ့ ကွာဟချက် ရှိခဲ့တာ ကတော့ အပိုင်အခွင့်အရေး လွဲချော်မှု ပါပဲ ။ ရက်ဖိုဒ့် ဟာ ဒီရာသီ မှာ ၂၁ ပွဲ ကစားပြီး ( ၁၈၈၁ မိနစ် ကို တစ်ပွဲစာ မိနစ် ၉၀ ဖြင့် စား ကာ ယေဘုယ တွက်ချက်မှု ) ၁၄ ဂိုး သွင်းယူ နိုင်ခဲ့ရာမှာ အပိုင် အခွင့် အရေး လွဲချော်မှု ၉ ကြိမ်သာ ရှိခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါဟာ တိုက်စစ်မှုးတစ်ဦး ရဲ့ အရည်အသွေးကောင်း တစ်ခု လို့ ဆိုရင် မမှားနိုင်ပါဘူး ။
တမ်မီအေဘရာဟမ် ကတော့ ၂၂ ပွဲ ကစားရာမှာ ၁၃ ဂိုး သွင်းနိုင် ခဲ့ ပေမယ့် အခွင့်အရေး လွဲချော်မှု အရေ အတွက် က 17 ကြိမ် အထိ ရှိနေခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါဟာ အေဘရာဟမ် ရဲ့ အကြီးမားဆုံး အားနည်းချက် ဖြစ်ပြီး တိကျသေချာတဲ့ အဆုံးသတ်နိုင်စွမ်း ( Clinical finishing ) ဟာ တိုက်စစ်မှုး တစ်ယောက် အတွက် မရှိ မဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အရာလို့ ဆိုရမှာဖြစ် ပါတယ် ။
ဒီရာသီ လီဗာပူး နဲ့ အိုးထရက်ဖိုဒ့် မှာ သရေ ကျခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ ရက်ဖိုဒ့် ဟာ အခွင့်အရေးကောင်း တစ်ကြိမ်သာ ရခဲ့ပြီး ဒီ တစ်ကြိမ် တည်းကို ဂိုးအဖြစ် ပြောင်းလဲ နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ယမန်နှစ် ရာသီက လက်စတာ စီးတီး ကို အနိုင် ယူခဲ့တဲ့ ပွဲတုန်းကလည်း အခွင့်အရေး ကောင်း တစ်ကြိမ် ကို သွင်းဂိုး အဖြစ် ပြောင်းလဲပြီး တစ်ပွဲလုံး အဖိ ခံ ခဲ့ရတဲ့ ယူနိုက်တက် ကို နိုင်ပွဲ ရှာဖွေ ပေးခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါဟာ မားကပ် ရက်ဖိုဒ့် ဆီကနေ တမ်မီ အေဘရာဟမ် အတုယူ လေ့လာ သင့်တဲ့ အရည် အသွေးကောင်း တစ်ခု ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ အဆုံးသတ် အရည် အသွေး ကို တိုးတက်အောင် လေ့ကျင့်မှုတွေ ပြုလုပ် ရမှာပဲဖြစ် ပါတယ် ။ ပြိုင်ဘက် ဧရိယာထဲ မှာ ထိချက် နည်းနည်း နဲ့ ဂိုး သွင်းနိုင်ဖို့ ကိုလည်း ထိပ်တန်း အထောင် တိုက်စစ်မှုးတွေ ဆီကနေ လေ့လာ သင်ယူ ရမှာပါ ။
အေဘရာဟမ် ဟာ အခုမှ ၂၂ နှစ် ပဲ ရှိပါသေးတယ် ။ ရှည်လျားလှတဲ့ အနာဂါတ် ခရီးလမ်းတွေ က သူ့ကို စောင့်ကြို နေ ပါတယ် ။ ဒီခရီး ကို အောင်အောင်မြင်မြင် လျောက်လှမ်း နိုင်ဖို့ ဆိုရင်တော့ အခုထက် ပိုပြီး တိုးတက် လာအောင် လေ့လာ သင်ယူ ရမှာ အမှန် ပါပဲ . . . . .